मानसिक स्वास्थ्यका लागि घातक बन्दै PUBG | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
पुस ३०, २०७५ सोमबार १८:०:२७ | एजेन्सी
अचेलका युवा तथा किशोर–किशोरीहरुमाझ प्रिय बन्दै गएको भर्चुअल खेल हो पबजी (PUBG) । यो अनलाइनको माध्यामद्वारा मोबाइल तथा कम्प्युटरमा खेलिन्छ । यो खेल खेल्न थालेपछि खेल्ने मान्छेमा चाँडै नै यसको लत बस्छ । त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो खानपिनसमेत भुल्छन्, अर्थात आफ्नो महत्वपूर्ण कामको पनि उनीहरुलाई वास्ता हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरुमा विभिन्न मानसिक समस्या उत्पन्न हुन थाल्छन् ।
‘प्लेयर अननोन ब्याटलग्राउण्ड’ अर्थात छोटकरीमा पबजी भनिने यो खेल व्यस्त दुनियाँमा सबैभन्दा बढी खेलिने अनलाइन खेल बन्दै गएको छ । समूहमा खेलिने यस खेलप्रतिको लोकप्रियताले बालबालिकाहरुमा गलत प्रभाव पार्दै आएको मनोचिकित्सकहरु बताउँछन् । मनोचिकित्सकहरुका अनुसार यो खेल खेल्नेहरुको मानसिक तथा शारीरिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा यस खेलले पारेको प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरिएको छैन । तर यस खेलबारे सामाजिक सञ्जालमा शेयर हुने भिडियोका आधारमा यहाँ पनि खेल्नेहरुको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस खेलको बढ्दै गरेको लतका कारण नेपालमा पनि युवाहरुमा मानसिकसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् ।
पबजी खेलका कारण हुने सामान्य समस्या यसप्रकार छन् :
सामान्य कुरामा पनि झर्किनु, साथीभाइ तथा घरपरिवारका सदस्यसँग असमान्य व्यवहार देखाउनु ।
यस्तै खेलमा देखाइने हतियारका कारण बच्चाहरुको दिमागमा हिंसात्मक विचार उत्पन्न गराउने र यसले उनीहरुमा नैराश्यता पैदा गराउँछ ।
Jan. 15, 2019, 7:16 p.m.
होइन यस्तो कुरा बिना अनुसन्धान किन लेखेको हो ?
April 9, 2019, 7:18 a.m.
के कुरा गरेको अनुसन्धान बिना कसैले यस्तो लेख्छ ? सही त लेखेको छ /